Feeryahanka qarnigii 20aad oo geeriyooday isagoo 74 jir ah | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Feeryahanka qarnigii 20aad oo geeriyooday isagoo 74 jir ah
Feeryahanka qarnigii 20aad oo geeriyooday isagoo 74 jir ah
Posted by: radio himilo June 4, 2016
Halyeygii miisaanka feerka culus Mohamed Ali ayaa ku geeriyooday Isbitaalka ARIZONA oo xanuun hayay awgii loo dhigay maallintii Khamiista.
Wuxuu la xanuunsanayay halyeygu dhibaato neef mareenka ka heysatay oo sabab uu u ahaa xanuunka Parkinson oo la sheegay mar in laga daweeyay 1980kii.
Ali ayaa lagu aasi doonaa magaaladdii uu deganaa Louisville sida ay sheegeen ehelkiisa.
Haddii aan eegno taariikhdiisa oo kooban, waxa uu ku dhashay magaaladda Louisville, ee gobolka Kentucky, 17dii Janaury 1942.
Wuxuu ahaa mid kamid ah cayaartoydii ugu magaca dheeraa ee dunida soo maray, waana sababta uu u muteystay magaca ah Cayaaryahanka Qarniga.
1964tii kaddib ku guuleysigiisa feerka miisaanka culus, wuxuu qaatay diinta Islaamka, isagoo la baxay magaca Mohamed Ali, wixii waqtigaa ka horeeyayna wuxuu watay magaca Cassius Marcellus Clay, Jr.
Sanadkii 1975 ayuu si toos ah u sheegtay inuu Yahay Muslim Sunni ah oo jecel kuna ad adag diinta Islaamka.
Ali ayaa ka fadhiistay cayaaraha sanadkii 1981, isagoo ku guuleystay 56 kamid ah 61 tartan feer oo uu ka qeyb galay.
Mohamed Ali Clay ayaa sidoo kale ahaa ololeeye bulsheed oo u dagaalami jiray dadka madow ee cunsuriyadda iyo falalka aadanaha ka dhanka ah la kulma iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah umadda Muslimiinta, isagoo 1963 iska diiday inuu ka qeybgalo dagaalkii Mareekanku ku qaaday Vietnam.
Feeryahano magac ka sameeyay feerka culus oo ay kamid yihiin saaxiibkii marna ahaa ninkii ay feerka ku loolami jireen George Foreman iyo feeryahanka aan weligii la garaacin Floyd Mayweather, ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid halyeyga 1990kii ku guuleystay cayaaryahanka qarniga.
Mohamed Ali oo afar goor guur sameeyay ayaa dhalay shan hablood iyo labo wiil, isagoo guurkiisii u horeeyay sameeyay 14 August 1964.
Guurkiisa koowaad ayaanan waarin oo xaaskii u dhaxday waxay kala tageen 10 Janaury 1966 markii ay ka biyo diiday xirashada xijaabka.
August 17, 1967 wuxuu guursaday Belinda Boyd oo kaddib arooskooda qaadatay diinta Islaamka lana baxday magaca Khalilah Ali, iyadoo u dhashay afar carruur ah oo kala ah Maryum (born 1968), twins Jamillah and Rasheda (born 1970), and Muhammad Ali, Jr. (born 1972.
1977 wuxuu guursaday Mohamed Ali Clay wuxuu guursaday Veronica Porsche waxayna u dhashay laba gabdhood oo kala ah Hana iyo Laila.
Laila ayaa iminka heysa waddadii Aabaheed waa feeryahanad aan laga badin barbarana lala gelin 24 dagaal oo ay gashay.
November 19, 1986 Mohamed Ali wuxuu guursaday Yolanda (“Lonnie”) Williams oo ay saaxiibo ahaayeen tan iyo carruurnimadoodii iyagoo isku dhalay Asaad Amin.
Previous: Dhageyso: Barnaamijka Shaqsiga Caalamka
Next: Dhageyso: Barnaamijka Howl iyo Himilo